I-All-in-one player karaoke
I-Mic engenantambo / enentambo
Isidlali se-DVD / CD
Imikhiqizo ye-Karaoke suite
Ungawushintsha kanjani umsindo wesiteji ekusebenzeni?
Umsindo wesiteji uzodlala indima ebalulekile emculweni wokucula, emidlalweni yobuciko, nasemisebenzini. Ukuze uthuthukise umphumela wokuzwakala kokudlala kwesiteji, kubalulekile ukuhlaziya nokutadisha ubudlelwano phakathi kwamakhono wokulungisa umsindo wesiteji nemiphumela ekusebenzeni, ukuze ubeke ...
Izici eziningana ezithinta ikhwalithi yemishini yomsindo yenkomfa
Ngokuqhubeka kwezikhathi, izinkampani manje zinemishini yomsindo engcono yenkomfa. Uma ufuna ukubamba ngempumelelo umhlangano ngamunye, ikhwalithi yemishini yomsindo yenkomfa ibaluleke kakhulu. Ngakho-ke yiziphi izinto ezithinta ikhwalithi yemishini yomsindo yenkomfa? ? Lalela lokho ...
Amaphuzu Wokunakwa Ekulungisweni Kwamaphutha Kwesiteji Umsindo Osebenzayo
Umsebenzi wokulungisa amaphutha wobunjiniyela obuzwakalayo udinga ukuphathwa ngesimo esibucayi nesinomthwalo. Kungemva kokuqinisekisa ukuthi ukwakheka, ukwakhiwa, ukwakheka kohlelo nokusebenza kwemishini yomsindo esiteji kuqondakala ngokuphelele lapho kungatholwa umphumela wokulungisa amaphutha kangcono. Okwe-debuggi okujwayelekile ...
incazelo yesikhulumi esigcwele
Isikhulumi esinezindlela ezimbili sinezipika ezimbili, i-subwoofer ne-tweeter. I-subwoofer ne-tweeter zihlukaniswe nge-crossover futhi zixhunywe kwi-subwoofer ne-tweeter ngokulandelana. Ukuqondanisa Amakhono Ezipikha Zolayini Olusebenzayo kanye nama-Amplifiers Amandla Kuzinhlelo zokulalelwayo zobuchwepheshe, kunengqondo kuphela futhi kunembile ma ...
Yiziphi izinyathelo zokuqapha lapho usebenzisa izikhulumi zenkomfa?
Ukuthandwa komsindo wenkomfa kuletha lula okukhulu emsebenzini wabantu, futhi ngenxa yezinzuzo zawo, abantu bawusebenzisa kaningi. Ngoba imvamisa yokusebenzisa izipikha zengqungquthela eziqeqeshiwe egumbini lenkomfa iphezulu kakhulu, ukwenza izipikha zenkomfa zi ...
Buyini ubuchwepheshe bemisindo yasesiteji?
Emidlalweni yeshashalazi yasendlini efana nezigaba zemidlalo yaseshashalazini, imfuneko yokuqala ubuciko bomsindo. Okokuqala, ikhwalithi yomsindo kufanele iqinisekiswe. Kumele kujabulise indlebe namathoni amahle. Imidlalo yaseshashalazini evulekile yangaphandle. Isidingo sokuqala ubuchwepheshe bezwi. Esimweni ...
izinkinga ezincane ekhaya yaseshashalazini
Amathiyetha amaningi asekhaya ajwayele ukungazinaki ezinye izinto angazikhathaleli, njengokuthi ungahamba kanjani ulayini, yiziphi izinto ezidingekayo zokuvala umsindo, futhi into ebaluleke kakhulu ukwenza uphahla lwesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi. Eminye imindeni ithanda ama-meteor akhanyayo ngokubukeka okuhle, okuyizinto ngempela ...
Uhlelo Lokwakha Itiyetha
1. Isikhundla se-projection Iphuzu elibaluleke kakhulu ekwakhiweni kwetiyetha lasekhaya ukukhetha indawo ebonakalayo yokuqagela. Ngemuva kokuqinisekisa indawo ye-projection yegumbi, njengoba kukhethwe umhlobiso waseshashalazini lasekhaya, usayizi we-projection kufanele okungenani ube ngamayintshi ayi-100. Ngokuya ngesilinganiso se-1 ...
Amakhono okuthenga i-amplifier yamandla [i-GAEpro audio]
Ngokusebenzisana nochungechunge lwethu lwe-flagship audio amplifier-MB, imiphumela yemisindo ingabonakaliswa ngokuphelele. Yini umsindo webanga eligcwele nezindlela ezintathu? 1. Ububanzi bemvamisa buhlukile: Imvamisa ephelele, njengoba igama lisho, ibhekisa ebangeni lemvamisa ebanzi nokuthakwa okubanzi. Okudlule ...
Amakhono wokuthenga amandla we-amplifier
Uma ukhetha i-amplifier yamandla, kufanele uqale unake ezinye zezinkomba zayo zobuchwepheshe: 1. I-impedance yokufaka: imvamisa ikhombisa usayizi wekhono lokulwa nokuphazamiseka kwesikhulisi samandla, imvamisa phakathi kuka-5000-15000Ω, inani likhulu, qina isibambiso sokulwa nokuphazamiseka ...
Yini ubukhulu begumbi elingcono kakhulu letiyetha yasekhaya?
Ngabe usayizi wegumbi onombono omuhle wetiyetha yasekhaya? Kumele wazi ukuthi ukusebenza okunembile kakhulu kwedizayini yaseshashalazini ephumelelayo ngomsindo nomthelela wesithombe; Ukuthi umsindo muhle noma cha kuncike kokufana, ukulungiswa, kanye nezikhala zemishini, ku-additi ...
Uyini umthombo weDolby Atmos yaseshashalazini lasekhaya
I-Dolby Atmos yizinga eliphakeme lomsindo ozungezile owethulwe yiDolby Laboratories ngo-2012. Isetshenziswa kumatiyetha ama-movie. Ngokuhlanganisa izipikha zangaphambili, ezinhlangothini, ezingemuva nezasesibhakabhakeni ngokucutshungulwa komsindo okuyinkimbinkimbi nama-algorithms, inikeza iziteshi ezingama-64 zomsindo ozungezile, okwandisa umqondo wendawo ...
ktv umsindo-yimuphi umkhiqizo ongcono?
Kulezi zinsuku, njengoba isikhathi sokuphumula sabantu abasha siba sikhulu ngokwengeziwe, abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna ukuvula izindawo eziningi kakhulu. Kepha umsindo onekhwalithi enhle yomsindo uzoletha inani elikhulu labathengi ku-ktv, ngoba wonke umuntu kufanele aqaphele lapho ekhetha uhlobo lomsindo lwe-ktv. Ngakho-ke, yini intengo ...
Ngabe ngidinga ukumisa umsindo owengeziwe we-KTV lapho ngineshashalazi lasekhaya?
Ngokuthuthuka kwezinga lokuphila, abantu abaningi bafake amatiyetha asekhaya, futhi izindlu zokuhlala zamaholide ezizungeze ezinye izindawo ezinhle nazo zifakwe isethi ephelele yamathiyetha, umsindo we-KTV, imidlalo yebhodi neminye imishini yokuzijabulisa. Ngakho-ke ungayilungisa kanjani i-audio yangasese yaseshashalazini lasekhaya, uma udinga uku ...
Ukuhlaziywa kwezinhlobo ezahlukahlukene zezinhlayiya zepulasitiki ze-PVC
Njengento yamakhemikhali ethandwa kakhulu emakethe, abakhiqizi abaningi benze ucwaningo lokukhiqiza ngezinhlayiya zepulasitiki ze-PVC. Ngemuva kweminyaka yocwaningo lokukhiqiza, izinhlayiya zepulasitiki ze-PVC sezivele zivele emakethe ngezindlela ezahlukahlukene, ezingahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi abaningi. Namuhla ...
Izinhlayiya ze-PVC nazo ziwuhlobo lwezinhlayiya zepulasitiki. Izinhlayiya zepulasitiki zibhekisa kuplastikhi oyimbudumbudu, ngokuvamile ahlukaniswe izinhlobo ezingaphezu kwezingama-200 nezinkulungwane zezinhlobo zehlukanisiwe. Izinhlayiya ze-PVC zibhekisa kuplastiki abayimbudumbudu abenziwe nge-pvc! I-PVC iyi-polyvinyl chloride plastic enemibala egqamile ...
Ukufakwa okujwayelekile ngokwezifiso kohlelo lweshashalazi lasekhaya
Izinga lemidlalo yaseshashalazini lasekhaya liqukethe ukucaciswa okubili: Ukucaciswa okujwayelekile kwesikhulisi somsindo esizungezile setiyetha lasekhaya nokucaciswa okujwayelekile kohlelo lwesipikha esihlanganisiwe setiyetha lasekhaya. Ngemuva kokuqaliswa kwalezi zindinganiso ezimbili, kukhomba ukuphela kwesimo sokuthi bekungekho ...
Ingabe kunesidingo ukusebenzisa isikrini se-arc endaweni yaseshashalazini yasekhaya?
Ingabe kunesidingo ukusebenzisa isikrini esigobile esigcawini sasekhaya? Isikrini esigobile sinezinzuzo eziningi. Isibonelo, isithombe esigobile sizohambisana kakhulu nokwakheka kwamehlo, izinwele zizobe zikhululekile kunepuleti eliyisicaba, futhi isithombe sizoba namandla kakhulu lapho ubuka ama-movie e-3D. Ngaphansi kwiphi isekhethi ...
Umsindo wetiyetha yasekhaya ushumekwe
Manje, abantu abaningi ngokwengeziwe bavame ukufaka amasistimu waseshashalazini lasekhaya ekhaya. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwamazinga abantu okuphila, izidingo zabantu zekhwalithi yempilo ziya ngokuya ngokuya zikhula. Abangane abaningi manje bakha indawo yaseshashalazini emakhaya abo, ukuze umndeni wabo ...
Yiziphi izinto ezilungele ukuhlobisa umsindo waseshashalazini lasekhaya
Kukhona okushiwo embonini yomsindo, "Dlala ngemishini ekuqaleni, dlala ngezintambo futhi udizayine ngomkhuhlane." Kuyabonakala ukuthi ukwakheka kubaluleke kakhulu ekuhlobiseni amathiyetha asekhaya ezindlini zokuhlala, futhi ukwakheka komsindo nakho kudonse ukunakekela kwabaningi ...
Ngabe itiyetha lasekhaya lingasetshenziswa ne-KTV?
Ezimbonini zendabuko, ukwenza ngokwezifiso komuntu uqobo kuzoba ukusetshenziswa okujwayelekile. “Emphakathini wanamuhla, akukho ukusweleka kwabantu abasezingeni eliphezulu abajabulela abasiki bengqephu abazimele, abasebasha abasezingeni eliphezulu, nabaholi bezimboni abanezincazelo eziqinile zamasiko. Abathengi baseChina ...
Izindlela zokwakhiwa kwethiyetha lasekhaya nezindlela zokuhlobisa
Okokuqala, ake sibheke izinto okufanele siziqaphele: 1. Naka ubukhulu begumbi Okokuqala, naka ubukhulu bekamelo. Okwesibili, kubalulekile ukubheka ukuvinjelwa kwemisindo, ukumuncwa komsindo nemiphumela yokusakazeka kwemishini eshashalazini lasekhaya. 2 Ukufaniswa kwe ...
Yimiphi imininingwane edinga ukunakwa lapho kwakhiwa uhlelo oluhle kakhulu lwamafilimu nethelevishini
Uhlelo lwehholo lekhwalithi ephezulu lwethelevishini nethelevishini aluwona nje umphumela womphumela ohlangene wemishini yokulalelwayo nokubukwayo, kepha futhi luhlobene kakhulu nomklamo wakho wokuhlobisa. Uma imininingwane yakho yokuhlobisa iphathwa kahle, izothuthukisa umphumela wegumbi lakho lokulalelwayo nokubukwayo lasekhaya ngokugcwele ...
Ngabe uke wathinta ama-taboos ekusetshenzisweni komsindo ehholo lefilimu nethelevishini?
Ngokuthandwa kwemishini yokulalelwayo emahholo amafilimu nakumabonakude nokwanda kwabasebenzisi bamahholo amafilimu nawethelevishini, imishini eminingi esezingeni eliphezulu ingene ngempumelelo ezimpilweni zabasebenzisi emahholo amafilimu nakumabonakude. Umsindo, njengomshini oyinhloko, uyingxenye ebalulekile yefilimu nocingo ...
Izinkinga ezincane ezijwayeleke kakhulu ezibhekene nokwakha uhlelo olubukwayo
Ngabe i-TV egumbini lokuphumula isadingeka? Ngesikhathi se-Intanethi ephathekayo, ngisho nabazali sebeqalile ukulala phansi kusofa babuka amavidiyo nezindaba komakhalekhukhwini babo, kanti ne-TV icishiwe isikhathi eside. Igumbi lokuphumula nalo alikwazi ukungenzi lutho. Kuyadingeka ukuthi uJoule abuke okuhlukahlukene ...
Yini okufanele ngiyenze uma uhlelo lokulalelwayo olubukwayo lwasekhaya lumunca umsindo kuphela kodwa lungavikeleki komsindo?
Isistimu yokubukwayo yasekhaya: ngokuvamile unake lawa maphuzu ayisihlanu wokufakwa kwemisindo nokumunca umsindo. 1. Umsindo wohlelo lwe-audiovisual ungabonakala ngezindlela eziningi: Okokuqala, ukukhetha okunengqondo kwezinto zokwakha umsindo. Kepha futhi naka izinto zokumunca umsindo ...
Ungayikhetha kanjani i-amplifier yamandla wohlelo olubukwayo?
Uhlelo oluphelele lokubukwayo lubandakanya amasekethe amaningi asizayo nemishini, efana nomsindo, umthombo wesiginali, isikhulisi samandla, isidlali seCD, njll. Uhlelo lomsindo luyoba nesibopho ekwethuleni imiphumela yohlelo lokulalelwayo nokubuka komthombo wesiginali kuye kwisikhulisi samandla , emandleni a ...
Ungalithuthukisa kanjani ikhwalithi yomsindo wokudlala enkundleni yakho yaseshashalazini
Njengoba sonke sazi, indawo ye-acoustic yehholo lefilimu nethelevishini inomthelela omkhulu kakhulu ekudlaleni kohlelo lomsindo kunanoma iyiphi enye into yomsindo. Yize kunezindlela eziningi zokuthuthukisa indawo enomsindo, ukucutshungulwa okuningi kwesitudiyo sefilimu nethelevishini kuzoba ...
Uhlelo lwe-audiovisual Ungakhetha kanjani
Thuthukisa ikhwalithi yomsindo wokudlala
Njengoba sonke sazi, imvelo ye-acoustic yehholo lefilimu nethelevishini inomthelela omkhulu kakhulu emthelela wohlelo lomsindo kunanoma iyiphi enye into yomsindo. Yize kunezindlela eziningi zokwenza ngcono indawo enomsindo, ukucutshungulwa okuningi kwesitudiyo sefilimu nethelevishini kuzokwenza izinto ...
Ngabe ibhayisikobho yangasese kufanele ifakwe odongeni noma ibekwe umsindo ngaphandle?
Ngabe ibhayisikobho yangasese kufanele ingene odongeni noma ibeke isitiriyo ngaphandle? Le nto ibonakala ilula kakhulu. Noma uyibeke ngqo ngaphandle njenge-Hi-Fi yendabuko, noma uyibeke ngqo ngaphakathi kodonga, uhlanganise nodonga, noma uyibeke ngqo ngemuva kwesikrini ngesikrini somsindo. Ngabe ngempela ...
Ngabe i-TV yasekamelweni lokuphumula isadingeka? Ngesikhathi se-Intanethi ephathekayo, ngisho nabazali sebeqalile ukulala phansi kusofa babuka amavidiyo nezindaba emafonini abo, kanti ne-TV icishiwe isikhathi eside. Igumbi lokuphumula nalo alikwazi ukungenzi lutho. Kuyadingeka ukuthi ngezikhathi ezithile ubuke okuhlukahlukene kukhombisa ...
Umthombo: Isikhathi Sokufaka i-Inthanethi: 2020-11-05 Chofoza: Uhlelo oluphelele lokulalelwayo lubandakanya amasekethe amaningi asizayo nemishini, efana nomsindo, umthombo wesiginali, i-amplifier yamandla, isidlali seCD, njll. yemiphumela yohlelo lwe-audiovisual kusuka kusiginali ...
Ngabe kunesidingo sokusebenzisa izinto zokwelapha i-acoustic?
Okulandelayo, sizoxoxa ngokwelashwa kwe-acoustic egumbini lamavidiyo ngokwezifiso. Njengamanje, imiklamo eminingi eyenziwe ngokwamakamelo ebukelwayo ebukelwayo ekhaya nakwamanye amazwe isebenzisa ukwelashwa kwe-acoustic ngezinga elikhulu noma elincane, ikakhulukazi kufaka ukumuncwa komsindo nokusakazeka. Vele, ezinye izixazululo eziphezulu zisebenzisa i-acoust exubile ...
Isu lokucushwa kwasesiteji langasese lokungena, udinga ukwazi kancane
Lapho ama-post-90s eshiya i-Coke bese ethatha ama-thermos, lapho ama-post-80s elangazelela ukuzinza nokugeza kumbuthano wabangane, kufanele ububule umlingo wesikhathi. Futhi empilweni yomndeni yanamuhla, iziphi izinto ezintsha ezidonse ukunaka kwawo wonke umuntu? Lokho kufanele kube yintandokazi entsha yangasese th ...
Ingabe kuhle ngempela ukuba yibhayisikobho yangasese egumbini elingaphansi?
ngomphathi ku 21-05-31
1. Into ebaluleke kakhulu okufanele uyicabangele ukuvuza kwegumbi elingaphansi. Into yokuqala okufanele uyenze ukuhlola ngokucophelela sonke isikhala sokuvuza. Izindlu ezintsha ezingaphansi zivame ukuvuza kangcono, kepha izindlu ezingaphansi ezindala zivame ukuvuza. Amanzi avuzayo azogugula izindonga kancane kancane futhi alimaze nemishini. Lokhu yi ...
Ukwakheka kohlelo oluphezulu lwe-cinema yangasese
Ngabe i-cinema yangasese ephezulu ifaka ini, ukusungulwa kohlelo lwe-cinema yangasese ephezulu kanye ne-cinema yangasese ephezulu, ukuthi ungakwenza kanjani lokhu, vumela uZhongle Bianxiao akwazise. Ukwakheka kohlelo oluphezulu lweshashalazi langasese (yikuphi okuqukethwe okufakwe enkundleni yemidlalo yangasese ephezulu), nakhu okungaphezulu ...
Isu eliwusizo lokumisa itiyetha lasekhaya
Lapho umnotho wezenhlalakahle ungena esigabeni sentuthuko esheshayo, imindeni eminingi yasemadolobheni izimisele ngokwengeziwe ukubuka amabhayisikobho ekhaya, angagwema isiminyaminya sezimoto edolobheni ngezimpelasonto futhi angajabulela ngokukhululeka isikhathi sama-movie somndeni nezingane. Ngakho-ke, ukusetha ifilimu nethelevishini h ...
Uhlobo luni lwendlu olulungele ukuhlobisa nokuklama itiyetha lasekhaya?
Abantu abaningi abazifelayo ngama-movie nomculo bafuna ukufaka indawo yaseshashalazini yangasese emakhaya ukuze bezwe injabulo yama-movie nomculo nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa-ke, kunomunye umbuzo okhathaza wonke umuntu, okungukuthi, hlobo luni lwendawo elifanele inkundla yemidlalo yangasese. Yize abantu abaningi ...
Idizayini yokuhlobisa yangasese, okuyisitayela sakho
Kulezi zinsuku ukufakwa kwezinkundla zemidlalo yaseshashalazini ezizimele sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba, futhi abantu abathanda ukubukela okulalelwayo nabasekhaya abaningi ngokwengeziwe sebeqala ukuyinaka, benethemba lokwakha indawo yaseshashalazini yangasese yasekhaya engahlangana ngempela nesitayela sabo sokuhlobisa ikhaya. Ngoba amazinga womuntu wonke a ...
Ukungaqondani okuningi ku-Acoustic Treatment ye-Private Home Theatre
Manje asidingi ukuya kumatiyetha amakhulu amakhulu wezentengiso ukuyobuka ama-movie, ngoba ukwenza ngokwezifiso, ukufakwa, nokwakhiwa kwezinkundla ezizimele ezizimele zasekhaya sekuyinto ekhethwa ngabanikazi abaningi. Imvelo ebukekayo yokubuka ikhaya nemiphumela ethusayo yokubukwayo ine-b ...
Yiziphi izeluleko zokuthenga iphrojektha
Okokuqala, ubukhulu besikhala Ukukhethwa kweprojektha kufanele kuncike kusayizi wesikhala. Uma ifakwe egumbini lokuphumula, isikhala segumbi lokuphumula kufanele sibe sikhulu ngokwanele. Ngokuvamile, indawo yegumbi lokuphumula kufanele ibe ngaphezu kwamamitha-skwele angama-20, ngaphandle kwalokho, uma isikhala sincane kakhulu, musa ...
Ungayihlulela kanjani uhlelo lomsindo lweshashalazi lasekhaya?
Umthombo: Isikhathi Sokufaka i-Inthanethi: 2020-11-10 Chofoza: Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo ye-cinema yangasese emakethe, futhi wonke amabhizinisi akholelwa ukuthi awabo ahamba phambili. Njengomnikazi ofuna ukwakha ibhayisikobho yangasese, ebhekene nemikhiqizo eminingi, kunzima ukusho okudingekayo. Ngalesi sikhathi, im ...
Ungamatanisa kanjani izipikha nezikhulisi zohlelo lwe-cinema yangasese?
Labo abakule mboni bayazi ukuthi umphumela wohlelo lwe-cinema yangasese kungumphumela wesenzo esihlanganyelwe semishini. Ngakho-ke, abathanda ama-cinema abazimele bazobheka ngokukhethekile ukuhlanganiswa kwemishini lapho besetha i-cinema yangasese. Ngemuva kwakho konke, indawo yaseshashalazini yangasese akuyona ukuthenga ...
Ungawuthuthukisa kanjani umoya wokubuka wohlelo lweshashalazi lasekhaya?
Lapho sinokuzethemba sokwakha uhlelo lokuphumula lwendawo yaseshashalazini olukhethekile lomndeni wethu, imvelo egumbini lokuhlala enenhlekelele nenqwaba yemishini yokulalelwayo egumbini lokuhlala ikwenze wahluleka ukuqala, futhi uqala ukulwa nokuthi uzokwenzani wenzeni? UBian Xiao ukutshele ...
Yini ongayikhetha kumshini we-HD Karaoke VOD? Yimuphi umkhiqizo omuhle
Ngokusabalala komhlaba wonke kwenethiwekhi nobuchwepheshe bedijithali, imikhiqizo eyanda kakhulu yokuchazwa ephezulu kwe-elekthronikhi, efana nemishini ye-karaoke karaoke enencazelo ephezulu, i-TV yedijithali enencazelo ephezulu, kanye ne-digital digital definition yencazelo ephezulu, ivele empilweni. Ikhwalithi yesithombe esezingeni eliphakeme nomsindo qu ...
Ukukhethwa komshini we-karaoke karaoke
Umshini we-Karaoke karaoke wumshini we-karaoke othandwa kakhulu eChina. Ihlukaniswe izinhlobo ezimbili: inguqulo ezimele yodwa ne-inthanethi. Uhlobo oluzimele lulungele amakamelo womhlangano wamayunithi womndeni nezinye izindawo, futhi inguqulo yenethiwekhi ilungele ukusetshenziswa kwe-KTV enkulu. Ikakhulu isingeniso ...
I-Professional Karaoke Player - Kungani Kufanele Ufunde I-Karaoke
Ukuze ube ngumdlali we-karaoke okhokhelwayo, kuzodingeka ube nombhobho, amashidi athile omculo, incwadi emayelana nomculo nezosha, futhi okubaluleke kunakho konke, udinga umshini we-karaoke. Imishini ye-Karaoke iyatholakala kalula ukuthi ithengwe ezitolo eziningi ze-karaoke. Ungakhetha ukuthi si ...
Ulwazi oluncane ngokuhlukaniswa kwesipikha
Njengezidingo zempilo, izimoto zingene ezinkulungwaneni zemindeni eTexas. Njenge "izindlebe" zezimoto, umsindo wezimoto ungukukhetha kokuqala kwabaningi abathanda ukuguqulwa. Ukuguqulwa okunengqondo komsindo wemoto ngeke nje kuthuthukise kuphela ikhwalithi yomsindo wemoto yakho, kodwa futhi kuzothuthukisa nokushayela kwakho. Ngi ...
Izikhulisazwi zaziwa kakhulu ngokuthi izimpondo. Kalula nje, kungamadivayisi we-electro-acoustic angaguqula amasiginali kagesi abe umsindo. Ziyimishini ebalulekile ezinhlelweni zomsindo. Njengomunye wama-transducers we-electroacoustic aguqula amandla kagesi abe amandla omsindo, ikhwalithi kanye ne-charac ...
Izici zomshini we-karaoke
Ibekelwe ngokukhethekile ukusetshenziswa komndeni, imishini eminingi ye-karaoke esemakethe yenzelwa izindawo ze-KTV, yehluleka ukubheka izidingo zamalungu omndeni. Ilungele ukusetshenziswa komndeni kalula
Umshini We-Karaoke Womndeni
Imishini ye-karaoke yomndeni imvamisa ibizwa ngemishini yekaraoke karaoke. Imishini yokuqala ye-karaoke ngamakhasethi wokuqopha amakhasethi, anomsindo kuphela kepha azikho izithombe. Ngemuva kokuphuma kwerekhoda ngama-1970s, i-karaoke yathuthukiselwa ezithombeni nasemibhalweni, nezithombe namazwi kwakhonjiswa e ...
Jabulela i-Karaoke ngokucula ngomshini we-Karaoke
Ukuthenga uhlelo lwe-karaoke kungaba wukutshala imali okukhulu, kepha uma ubhekisisa kahle, uzobona ukuthi kunezinto eziningi okufanele zitholakale.karoke system ktv Uthola inzuzo yokuba nezipikha zakho ze-karaoke, futhi ungasebenzisa kubo ekhaya lakho. Akutholi okungcono kunalokhu. Wh ...
Konke Mayelana nohlelo lweKaraoke
Uma ubulokhu uzama ukuthola indlela yokujabulela umculo nokucula ngasikhathi sinye, uzoba nentshisekelo yokufunda ukusebenzisa uhlelo lwe-karaoke.karaoke system ktv Karaoke kuyindlela enhle yokufunda ukukhuluma kahle futhi uziveze ku abanye. Uma ucula emshinini we-karaoke, ...
Izinhlelo ze-Powered DJ Speaker - Umhlahlandlela Omfushane Wokuthola Izipikha Ezifanele ze-DJ
Abantu abaningi basebenzisa igama elithi “isikhulumi sika-DJ” ukuchaza noma isiphi isipikha esenzelwe ukudumela phezulu umculo kubantu abaningi kakhulu endaweni yomphakathi. Isikhulumi se-dj esinamandla Ihholo, ihholo lokwamukela imishado, ngisho nendawo encane iklabhu yokudansa engahlelekile iyizibonelo ...
Uyini Umdlali WeKaraoke?
ngomphathi ku 21-03-26
Isidlali se-KTV Karaoke siyithuluzi elihle kunoma ngubani ofuna ukulalela umculo awuthandayo noma angene ezweni lokucula nelokwenza lomculo we-karaoke.ktv karaoke Abantu abaningi bayayithanda i-karaoke nobumnandi obuhambisana nayo. Uma ungomunye walabo bantu futhi ufuna ukuthatha ukucula kwakho bese ukhetha ...
Umehluko phakathi komshini wokuthinta konke okukodwa nekhompyutha ejwayelekile
Okokuqala, ukubukeka Amakhompyutha ajwayelekile, afaka amakhompyutha wedeskithophu nezincwadi zokubhalela, usayizi ovame kakhulu ngama-intshi ayi-14.5 kuye kwangama-22; ngenkathi i-touch screen yonke-in-one imishini ingahlukaniswa ngamamodeli amaningi, umshini wokukodwa ulengiswe odongeni bese ufakwa ngqo emhlabathini, i-si ...
Yikuphi ukubonisa kwezimboni okungcono?
Ukukhethwa kokuboniswa kwezimboni akukubi kakhulu, kepha ukukhetha imikhiqizo yakho ngokwezidingo zakho futhi kukunikeze ulwazi olufanele kakhulu. Lokhu okulandelayo kuchaza ukuthi ungasikhetha kanjani isibonisi esifaneleke kakhulu sezimboni ngokombono wempilo yokukhanya kwangemuva, amakhaza ...
Okufanele Ukufune Emshinini WeKaraoke
Uke wezwa nganoma yiziphi izinhlelo zeKaraoke KTV? Lokhu kumane nje kuyisengezo sakamuva kuzo zonke lezo zingxenye zokuzijabulisa ezenzela umshini wokuzithokozisa wasekhaya.ktv system karaoke Ngamagama alula, uhlelo lweKaraoke KTV isethi ye-TV eguqulwe yasebenza njengomshini weKaraoke. Njengoba kungenzeka ...
Funda ukuthi Ungacula Kanjani I-Karaoke - Okudingeka Ucabangele
Incazelo: Uhlelo lokusebenza lomculo oluku-inthanethi lwaseMelika luqale ukwethulwa ngaphansi kwegama elithi Karaoke ngo-2021 lwabe selusetshenziswa kumadivayisi we-iOS ngo-2021. Ukucula i-karaoke Lolu hlelo ekuqaleni lwalugxile ekufundeni izindlela zendabuko zokucula zaseJapan ezinjengamasu okuphefumula, iphimbo elizwakalayo, ukubiza amagama, ukubiza amagama nezwi. Ku l ...
Umculo weKaraoke wakhiwe yizigqi ezisethwe ezingomeni eziculwa ngabalaleli. Umculo weKaraoke uhlukile kwezinye izinhlobo zomculo ngoba uculwa kakhulu ngenkathi udlala. Lokhu kunikeza i-karaoke ukuthinta okungeziwe kokuzenzisa, okwenza kube mnandi ngokwengeziwe ukulalela. izinhlelo ze-karaoke lapho ...
Ukukhetha i-Cordless Microphone System
ICordless Microphone Systems iya ngokuya ithandwa kakhulu ngabaculi nabanye abathandi bomculo. Asikho isidingo sokukhathazeka ngezintambo ezixhumanisa izingcezu ezahlukene zemishini ndawonye, ​​noma ukukhathazeka ngehedsethi engahambelani noma i-earbud. Uhlelo lwemakrofoni olungenantambo luyinto ehlukahlukene ...
Izici okufanele uzicabangele lapho uthenga i-Karaoke System Microphone
Uma usemakethe yohlelo olusha lwasekhaya lwekharaoke, uzofuna ukubheka izinketho ezitholakalayo zombhobho futhi. Imakrofoni yohlelo lwe-karaoke Ikhwalithi yomsindo wakho ibaluleke kakhulu uma ucula futhi kubalulekile ukuthi ube nemishini efanele ukuze ukwazi ukucula ...
Izinzuzo Zomshini We-Karaoke Ephathekayo
Uma uzosebenzisa umshini we-karaoke ophathekayo, mhlawumbe yingoba ufuna ukuthatha ukucula uye ezingeni elilandelayo. Uyazi ukuthi kuyacasula kanjani lapho othile enza ngokweqile noma ezama ukuhlekisa noma okubaluleke kakhulu, lapho engaculi nhlobo. Imishini yekaraoke ephathekayo ikuvumela ukuthi ucule njengoba u ...
Ungayithenga kanjani imakrofoni engenantambo? Yiziphi izindlela zokuthenga imakrofoni engenantambo
Imakrofoni ezithengiswa emakethe zihlukaniswe kakhulu ngezigaba ezimbili ngokuya ngekhanda leveni: owodwa umbhobho onamandla, obonakala kakhulu ngekhwalithi yomsindo omuhle futhi awudingi ukunikezwa kwamandla; enye imakrofoni ekondensa, ebonakala ngokuqina. Sawubona ...
Ungayilungisa kanjani imakrofoni egumbini lokuhlangana elihlakaniphile
Umbhobho wengqungquthela ubonakala ungumuntu olula, kepha akunjalo. Luhlelo olunamandla lokulalelwayo nolubukwayo olunemishini ehlukahlukene ecebile. Kuphela lapho uhlelo lwenkomfa lumisiwe ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende lapho uhlelo lwenkomfa lungasebenzisa ithuba lalo ...
Ingabe Kufanele Ngithenge Umshini Omusha We-Karaoke?
Kunezinhlobo eziningi zezinhlelo zasekhaya ze-karaoke emakethe.karoke system system Ezinye zazo ziyizinhlelo ezilula zomsindo ezikuvumela ukuthi ucule kumakrofoni, bese isikhulumi sizodlala sibuyele ezwini lakho. Ezinye ziphelele nge-interface yekhompyutha ekuvumela ukuthi udlale amathrekhi alalelwayo ...
Ukuthola Umshini We-Karaoke Ngezingoma Zokucula
Uma ucabanga ukusetha umshini we-karaoke ekhaya, udinga ukucabangela izinto ezimbalwa. Uma ufuna ukwazi ukucula kanye nezingoma zakho ozithandayo futhi abantu bakuthande, kuzofanele uphume. Thola umshini we-karaoke omuhle kakhulu ngezingoma ozithandayo nokuthi p ...
Ukuthuthukiswa kwesikhathi esizayo kwezikhulumi ezingenantambo
Kulinganiselwa ukuthi kusukela ngo-2021 kuya ku-2026, imakethe yezipikha engenantambo yomhlaba izokhula ngezinga lokukhula ngonyaka elihlanganisiwe elingaphezu kuka-14%. Imakethe yesipikha esingenantambo yomhlaba (ebalwa ngemali engenayo) izofinyelela ukukhula okuphelele okungama-150% ngesikhathi sesimo sezulu. Ngesikhathi 2021-2026, marke ...
Isipikha sefoni yesipikha isisombululo esingenamanzi
Ngokuthuthukiswa kwamafoni ahlakaniphile, omakhalekhukhwini baba yisidingo ezimpilweni zethu. Azisetshenziswa kuphela njengamathuluzi wokuxhumana, kepha nokuzijabulisa, ukukhokha kanye ne-vibrato. Kungasilethela lula. Kodwa-ke, uma ifoni ephathekayo ingenawo umsebenzi ongangenisi manzi, nangengozi ...
Indima nezinzuzo nobubi besikhulisi samandla alalelwayo
ngomphathi ku 21-01-26
Isihlanganisi samandla omsindo esihlanganisiwe kubhekiselwa kuso njengempumelelo esethiwe. Umsebenzi wesikhulisi esihlanganisiwe ukukhulisa amandla esignali kagesi ebuthakathaka ethunyelwe isekethe engaphambili, futhi kukhiqizwe amandla amakhulu anele ukushayela isipikha ukuqedela ukuguqulwa kwe-electro-acoustic ....
Isingeniso esifushane sezikhulisi zomsindo
I-amplifier yomsindo iyithuluzi elenza kabusha isignali yomsindo wokufaka entweni yokukhipha ekhiqiza umsindo. Ivolumu yesiginali eyakhiwe kabusha nezinga lamandla kufanele kube neqiniso elifanele, lisebenze futhi lihlanekezele kancane. Ububanzi bomsindo bucishe bube yi-20Hz kuye ku-20000Hz, ngakho-ke i-amplifier kufanele ibe nokuhle ...
Isingeniso somshini weKaraoke
Umshini we-karaoke uhlukaniswe waba: umshini we-karaoke ozimele wedwa nomshini we-karaoke online. Ihlukaniswe ngenhloso: umshini we-karaoke wezohwebo, umshini we-karaoke wasekhaya 1. Abantu abathanda umculo, bathanda ukucula, futhi bafuna ukuba ngabaculi abadumile: Hambisa ikhaya le-KTV, cula kakhulu njengoba ufuna, futhi ube owakho ...
Isikali semakethe yomshini weKaraoke ngo-2021
Isikali semakethe semboni yomshini we-karaoke ngo-2021 sisuselwa kunombolo enkulu yocwaningo lokuqapha nokuqapha idatha okuhlanganisa izimboni ezinkulu (kufaka phakathi inani lokukhipha kanye nelokukhipha komkhiqizo oqondisiwe noma imboni ngesikhathi esithile, njll. inani labantu, izidingo zabantu, ...
Isingeniso semakrofoni engenantambo
a. Imodeli ye-Qualtz LOCKed: Isebenzisa i-quartz oscillator ukukhiqiza imvamisa eqondile futhi ezinzile yokudlulisa nokwamukela. Isifunda silula futhi izindleko ziphansi. Kungumklamo wesifunda ojwayelekile wemakrofoni yanamuhla engenantambo. Lolu hlobo lombhobho nesamukeli kungaba kuphela ...
Ukuhlukaniswa kwemvamisa yemakrofoni engenantambo
Ungakanani imvamisa umehluko phakathi kwesigaba se-V nesigaba se-U semakrofoni engenantambo U-segment ne-V-segment basebenzisa amaza ehlukene wokudlulisa amaza omsakazo. Onke angamabhendi emisakazo we-amateur. Ibhendi le-UHF yibhendi ephezulu kakhulu enemvamisa yesikhungo engu-145 MH ...
i-bluetooth amplifier application
1. I-adaptha ye-Bluetooth amplifier enezindawo ezahlukahlukene ezibonakalayo ze-USB: uhlobo lwe-disk disk, uhlobo lwe-Mini Key, uhlobo lokugoqa, ibhokisi. Isetshenziswa kumakhompyutha weWindows anezimbobo ze-USB nama-Mac anama-Mac OS X. Isibonelo, iPCGA-BA1 yakwaSony, encane nenhle, inesisindo esingu-5g kuphela, isibani sesikhombi emsileni sikhanyisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka ...
Isingeniso se-bluetooth amplifier
I-amplifier ye-bluetooth uhlobo lobuchwepheshe bokudlulisa inethiwekhi engenantambo. Ngaleso sikhathi, ubuchwepheshe obungenazintambo bekunesikhathi eside bukhona, futhi abanye babo sebengene esigabeni esivuthiwe. Isibonelo, ubuchwepheshe be-infrared bungatholakala kwimikhiqizo eyahlukene yabathengi efana nasekhaya ...
Kulezi zinsuku, abantu abaningi basebenzisa abadlali be-karaoke besimanje ukukhulula ingcindezi emsebenzini nasekutadisheni impilo.Abanye abantu bakwi-KTV, kepha abantu abaningi bathanda ukucula ekhaya, okungeyona nje elula kepha futhi ehambisana kakhulu nesifiso sabantu sokujabulisa umphumela wokulalelwayo. Abadlali beKaraoke ...
Imishini ye-Karaoke ngaphezu kwezipikha, imishini yomculo ibaluleke kakhulu, ikhwalithi yesikhulisi uqobo nayo ibaluleke kakhulu. Umsebenzi we-KTV kufanele uhlanganiswe nosayizi wekamelo lakho nezinto zokuhlobisa. Izindawo ezahlukahlukene zamakamelo kufanele zisebenzise izikhulisi zamandla ezahlukahlukene. Naka ...
Idokodo lethu eCanton Fair naseHongkong Electronics Fair
Igama le-karaoke lisuselwa emagameni aseJapan athi "ize" kanye "ne-orchestra". Ngokuya ngomongo, i-karaoke ingasho uhlobo lendawo yokuzijabulisa, ukuculela emuva, nedivayisi yokukhiqiza emuva emuva. Akunandaba nomongo, sihlala sisebenzisa imakrofoni, ukukhanya okukhanyayo ...
I-Karaoke yeMakrofoni engenantambo, Isidlali se-Airplay, I-Karaoke Microphone Ephathekayo, Isb Cd Player For Car,